Ny Fahagagana Voalohany Nataon’i Jesosy | Fiainan’i Jesosy
ILAY FAMPAKARAM-BADY TANY KANA
NANOVA NY RANO HO DIVAY I JESOSY
Telo andro izay no naha mpianatr’i Jesosy an’i Natanaela. Niaraka tamin’ny sasany tamin’ireo mpianany voalohany i Jesosy, ary nianavaratra nankany Galilia, faritra niavian’izy ireo. Ho any Kana, tanàna nahaterahan’i Natanaela, izy ireo, satria voasa tamin’ny fampakaram-bady iray tao. Teo amin’ny havoana eo avaratr’i Nazareta, tanàna nahalehibe an’i Jesosy, i Kana.
Namonjy an’ilay fety koa i Maria, renin’i Jesosy. Toa nikarakara an’ireo vahiny maro tonga tao izy, satria naman’ny fianakavian’ny mpanambady. Tonga dia tsikariny àry fa nisy zavatra tsy ampy ka hoy izy tamin’i Jesosy: “Tsy manana divay ry zareo.”—Jaona 2:3.
Te hilaza i Maria hoe mila manao zavatra i Jesosy. Hoy anefa i Jesosy: “Misy zavatra iombonako aminao angaha moa, ravehivavy?” (Jaona 2:4) Nampiasa an’io fomba fiteny io i Jesosy mba handavana ny soso-kevitr’i Maria. Mpanjaka voatendrin’Andriamanitra izy, ka ilay Rainy any an-danitra no tokony hibaiko azy amin’izay ataony, fa tsy ny fianakaviany na ny namany. Hendry i Maria ka nankininy tamin-janany ilay raharaha. Hoy fotsiny àry izy tamin’ireo mpanompo: “Ataovy izay rehetra lazainy aminareo.”—Jaona 2:5.
Nisy sinibe vato enina fitoeran-drano teo, ary nahalany rano 40 litatra mahery avy izy ireo. Hoy i Jesosy tamin’ireo mpanompo: “Fenoy rano ireo sinibe ireo.” Hoy izy avy eo: “Tovozy amin’izay, ka itondray ny mpiandraikitra an’ity fanasana ity.”—Jaona 2:7, 8.
Gaga ilay mpiandraikitra hoe tsara be ilay divay. Tsy fantany fa fahagagana no nahazoana azy io. Niantso ny mpampakatra izy, ka nilaza hoe: “Ny an’ny olona rehetra, ny divay tsara aloha no avoaka, ary rehefa mamo ny olona vao avoaka ny ratsiratsy. Ny anao kosa, ny divay tsara no notehirizinao hatramin’izao.”—Jaona 2:10.
Io no fahagagana voalohany nataon’i Jesosy. Vao mainka nino azy ny mpianany vaovao rehefa nahita azy io. Nankany Kapernaomy, tanàna eo avaratrandrefan’ny Ranomasin’i Galilia, i Jesosy sy ny reniny ary ireo rahalahiny taorian’izay.
Oviana ilay fampakaram-bady tao Kana?
Inona no nolazain’i Jesosy rehefa nanome soso-kevitra momba ny divay ny reniny?
Inona no fahagagana nataon’i Jesosy, ary inona no vokatr’izany?
Hizara Hizara Ny Fahagagana Voalohany Nataon’i Jesosy